Nezvedu | MyWeedSeeds.com
Isu tiri boka revatombo, riri muCanada avo vakatsaurira hupenyu hwedu kuunganidza, kuberekesa nekuparadzira mbeu kutenderera pasirese, nekuti isu tinotenda kuti munhu wese ane mvumo yekuyedza runako rwaAmai Zvisikwa zvedzidzo, zvekurapa kana zvekuvaraidza. Isu tinomhanya iyi yembeu yembeu kweanopfuura makore gumi. Pamwe munzira isu takateerera kune vatengi vedu zvavanoda, takadzidza nekuvandudza masevhisi edu kuzadzisa zvizere vatengi vedu vese. Naizvozvo isu tine vatengi vazhinji vanofara pasirese pasirese vanofadzwa nemabasa edu akanaka.
MyWeedSeeds.com ndeimwe yemabhangi ekutanga uye makuru embeu pa internet. Isu tanga tichishanda, kubvira patakatanga bhengi redu rembeu, mukubatana kunofadza nemumwe wevanonyanya kugadzira mbeu dzembanje pasi rese. Munguva yehupenyu hwedu takagamuchira huwandu hukuru hwemhinduro dzakanaka kubva kune vese vatengi vatsva uye vatengi vedu venguva dzose nezve edu emhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvemunhu masevhisi.
Ndatenda nekutora nguva yako kuverenga nezvedu!